Mpisolovava sy mpisolovava an'i Amal Khamis | Law Firms Dubai
Mpanolotsaina sy mpisolovava Amal Khamis
Lisitry ny mpanolotsaina, Mpanolotsaina ara-dalàna sy mpisolovava i Amal Khamis
Amal Khamis Advocates sy mpanolo-tsaina ara-dalàna dia orinasa eken'ny lalàna any UAE izay manana firaketana lava momba ny fahombiazana sy ny mpitarika matihanina any Dubai, UAE. Manana mihoatra ny 50 taona ny traikefa voakaly.
Mpanolotsaina Amal Khamis sy ireo mpanolotsaina ara-dalàna dia manolotra mpanjifa mpanjifa tolotra ara-dalàna mifantoka amin'ny mpanjifa sy lafo vidy amin'ny firenen'ny lalànan'ny orinasa lehibe kokoa. Ny firaisantsika mafy dia mirehareha amin'ny fomba fijerintsika sy ny fomba fijerintsika manokana amin'ny mpanjifa tsirairay. Miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay izahay mba hahitana sy hampihatra ireo vahaolana ara-dalàna namboarina mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Ireo mpisolovava Amal Khamis sy ireo mpanolotsaina ara-dalàna dia mizaka ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fifandirana miaraka amin'ny fanoloran-tena sy ny hamafiny na ny mpanjifantsika dia orinasa Fortune 500 na orinasa vitsy an'isa manokana.
Mpikambana ao amin'ny biraontsika: -
Ireharehan'ny biraonay ny zava-niainana isan-karazany nasehon'ny mpikambana tao amin'ny biraonay:
Ramatoa mpisolovava: Amal Khamis - nasionaly UAE
Ramatoa mpisolovava: Amal Khamis - UAE nasionaly- Mpanolotsaina ary mpanolotsaina ara-dalàna. izy no namorona ny birao Mpanolotsaina Amal Khamis sy Legal consultants. Manana mari-pahaizana diplaoma amin'ny fakana ny Shariah and Law (LLB) - University of UAE izy.
Amal Khamis dia mpisolovava zokiolona ao amin'ny Amal Khamis Advocates sy ny Legal Law consultants Law Firm. Manana traikefa mivelatra manokana amin'ny lalàna ara-barotra, lalàna momba ny asa, lalàna fananganana, lalàna media, fifandirana amin'ny orinasa.
Voarohirohy tamin'ny raharaham-barotra amin'ny orinasam-pifandraisana avo lenta sy olana momba ny fifandirana izy. Miara-miasa amin'ny mpanjifantsika izy mba hamahana ireo olana ara-barotra marobe izay atrehin'ny mpanjifanay isan'andro.
Izy no mitantana ny lafiny rehetra momba ny fiampangana mivoaka amin'ny olan'ny fiantohana sy ny olana amin'ny finoana ary amin'ny sehatra toy ny tompon'andraikitra amin'ny fiantohana, ny fanimbana fananana ary ny famotopotorana. Manana traikefa be dia be izy amin'ny karazan-draharaha sy trano famandrihana trano ary orinasa, anisan'izany ny fananganana, ny fividianana sy ny varotra, ny famatsiam-bola ary ny fanofa.
Atoa Alaa Jaber Muhammad Al Hoshy
Andriamatoa Alaa Jaber Muhammad Al Hoshy - nahazo diplaoma avy amin'ny Faculty of Law (LLB), avy ao amin'ny University Alexandria; Talohan'ny nananganana ny Firm Amal Khamis dia niasa tamina orinasa mpahay lalàna malaza any UAE tao amin'ny 'mpisolovava sy mpanolotsaina ara-dalàna' Hashim Al Jamal 'izy ireo ho mpanolotsaina ara-dalàna sy mpanolotsaina ara-dalàna ao an-trano.
Ny zavatra niainany taloha 15 taona tamin'ny naha-mpanolotsaina ara-dalàna ny orinasa mpampiasa vola sy ny mpifaninana miaraka amin'ny rafi-pampianarany ara-dalàna dia nahafahany nahafantatra tsara ny ahiahin'ireo mpanjifany ary nanoro azy ireo ny fizarana mahomby amin'ny loza mety hitranga amin'ny orinasan'izy ireo.
Nandritra ny asany maha matihanina dia nanoro hevitra ny orinasan'ny orinasa sy eo an-toerana hafa Andriamatoa Alaa ary mitantana ireo raharaha momba ny orinasa, ara-barotra sy ara-dalàna amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eo an-toerana momba ny lafiny samihafa amin'ny Lalàn'i UAE ao anatin'izany ny fikaonsily sy ny fiaraha-miasa; mandrafitra ny fifanarahana amin'ny fividianana sy ny fifanarahana, fifanarahana antoka, firaisankina stratejika, fifanarahana amin'ny tetikasa, manome torohevitra ara-dalàna momba ny fifanarahana orinasa, lalàna momba ny fifaninanana, famatsiam-bola, fanabeazana, lalàna ara-pitsaboana, lalàna momba ny angovo sy ny lalàna mifehy, fifanarahana ho an'ny daholobe, lalàna momba ny fananganana, Tetikasa EPC , lalàna momba ny asa, lalàna mifehy hetra ary fampiasam-bola avy any ivelany.
Andriamatoa Alaa dia mampihatra amin'ny sehatry ny fiantohana, tena trano ary ny lalàna momba ny varotra sy ny varotra, miaraka amin'ny fanamafisana ny fandrakofana fiantohana, ny fitsaràna sivily, ny trano sy ny raharaham-barotra.
Andriamatoa Salam Al Jabri
Andriamatoa Salam Al Jabri - mpisolovava tena za-draharaha sady matihanina, miasa amin'ny Emirà Arabo Mitambatra nanomboka tamin'ny 2006 ka hatramin'izao.
Nataony avokoa ny lafiny rehetra momba ny fitsarana an-tsokosoko any amin'ny fitsarana any UAE rehetra, ao anatin'izany ny fifanolanana ara-barotra sy ny fandraharahana, fanandevozana, fampidinana, fifanarahana, fanelanelanana, fihaonamben'ny fametrahana.
Nanampy tamin'ny fanomanana fanandramana maro tamin'ny raharaham-pitsarana sivily isan-karazany izy ary namolavola sy niady hevitra momba ny lalàna mifandrafitra sy ny hetsika momba ny hetsika, anisan'izany ny fihetsika hanafoanana sy famintinana fitsarana, mitondra mankany amin'ny famahana am-pahombiazana sy ny fametrahana vahaolana mahomby.
Manoro hevitra ny mpamorona fananana momba ny resaka momba ny fampiasana ny tany ao anatin'izany ny fanomanana ny fifanarahana fizarana, ny lease, ny fahazoan-dàlana, ny fanamorana, ny fanekena voafetra ary ny fanambarana momba ny fitantanana. Fanolorana ny taratasy ara-dalàna ho an'ny matihanina sy ny mpanjifa momba ny fifanarahana voatanisa ao anatin'izany ny adidy hanao asa tsara amin'ny fifampiraharahana fifanarahana, momba ny fifanarahana tsy ara-drariny, momba ireo olana mifandraika amin'ny fampiharana ny fifanarahana momba ny fivarotana tany, amin'ny fanofana tany satroboninahitra, ny kolikoly sy ny kolikoly. Lalànan'ny vaomiera
Andriamatoa Sayed Muhammad Abdul Aziz
Andriamatoa Sayed Muhammad Abdul Aziz - mpisolo vava nasionaly sy mpanolo-tsaina ara-dalàna - nahazo diplaoma tamin'ny Faculty of Law - niasa tao amin'ny Emira Arabo Mitambatra nandritra ny 15 taona ary tany India nandritra ny 14 taona tamin'ny karazana tranga rehetra.
Manome toro-hevitra momba ny fitantanana sy ny paikady, habetsahana, fanodinana, fifanekena ara-panekena, fifanarahana fifandirana, fanitarana lalàna iraisana sy fatra, andraikitra ary fanarenana. Manoro hevitra momba ny olana momba ny fiantohana, indrindra ao amin'ny faritra misy tambin-karama / mpampiasa. Lalàna iraisana mifandraika amin'ny mpampiasa sy ny antoko fahatelo. Fitsaboana tsy fahasalamana, lozam-piarakodia, lozom-bahoaka, lozam-piaramanidina ary fitakiana lalàna mahazatra hafa.
Ny tena fototry ny fahaizany dia ny fampitsaharana ny asa (famonoana tsy ara-drariny, fiarovana amin'ny ankapobeny, fanitsakitsahana ny fangatahana fifanarahana), fifampiraharahana momba ny fifanarahana momba ny fifanarahana, fitantanan-draharaha, ary fiaraha-miasa amin'ny HR, Strategic IR ary lalàna momba ny asa, fitantanana ny fifanolanana indostrialy, fanovana ny toeram-piasana sy ny fandaminana fametrahana toe-pahasalamana sy fiarovana amin'ny asa.
Ary vao haingana kokoa, ny lafiny ara-dalàna momba ny fahaleovantenan'ny tontolo iainana, ao anatin'izany ny fitantanana ny laza manokana eo ambanin'ny angon-drindrina vaovao manitsakitsaka ny fitaterana lalàna sy lalàna momba ny heloka bevava.
Ramatoa Mona Ahmad Fawzy
Ramatoa Mona Ahmad Fawzy - manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny sehatry ny lalàna isan-karazany izy ao anatin'izany ny fitoriana ny kilasy, ny fampanoavana faobe, ny lalàna momba ny trano, ny fitsarana ary ny fanangonana any Dubai sy UAE, ny lalàna mifehy ny asa, ny raharaham-pitsarana, ny lalàna mifehy ny fianakaviana , ary ny raharaham-pitsarana sivily amin'ny ankapobeny. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fitantanana ny birao izy, ny hetsika anatiny. Izy koa dia mpitantana ny fifandraisana amin'ny daholobe ao amin'ny birao.
Nahazo traikefa izy tamin'ny: Settlement of Residential, Commerce fananana; Toerana misy ny orinasa; Fampiharana fahazoan-dàlana amin'ny alikaola; Fanomanana tahirin-kevitra fiarovana ho an'ny mpampindram-bola ambaratonga faharoa sy fahatelo ary tsy miankina; ary manampy amin'ny fanomanana Wases & Probate ary Retail Leases.
Izy koa dia manana fitantanana karazan-draharaha isan-karazany momba ny Conveyancing and Banking and Finance ho an'ny mpanjifantsika momba ny Conveyancing, Lending sy statutory ary anisan'izany - Ny Karazan'orinasa rehetra; Fanatanjahantena; Fomba sy Surrenders of Easement; Famindrana drafi-pandresena mamboly; Famindrana tany eo anelanelan'ireo antoko mifandraika;
Andriamatoa Raj Jain
Andriamatoa Raj Jain - Mpandrindra ara-dalàna- Izy dia mandray anjara mavitrika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanohanan'ny litorjika, ao anatin'izany ny fandrafetana ny fitalahoana sy ny firesahana, ny fanatrehana ny valin-kafatra sy ny fifandraisan'ny mpanjifa, ny mpisolovava, ny manam-pahaizana, ny tompon'andraikitry ny fitsarana ary ny sampan-draharaham-panjakana.
Manana traikefa feno 7 taona izy amin'ny maha mpandrindra ara-dalàna azy ary manana traikefa be dia be amin'ny fandrakofana fiantohana voalohany sy ankolafy fahatelo, fanodinana, fanorenana, lalàna momba ny fananana, lalàna momba ny fianakaviana, fahavoazana manokana, heloka bevava, lalànan'ny orinasa ary orinasa lalàna.
Ireto ny fomba fiasa lehibe indrindra ananany: ny orinasa sy ny tsy fandevenana manokana; Fanarenana ny trosa;
Ady fifanolanana; Fanenjehana ara-dalàna; Ady hevitra, tany sy fitokisana; Fitsarana ny ratra mahazo ny tena manokana;
Atoa Ahmed Mohamed
Andriamatoa Ahmed Mohamed - izy dia iray amin'ireo mpisolo vava anay, miasa ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra hatramin'ny 2007 ka hatramin'izao.
Manome torohevitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fifandraisana mifandraika amin'ny mpanjifana amin'ny lafiny rehetra izy ary manana traikefa manerana ny indostria marobe ao anatin'izany ny Komity Misahana ny Fifamaliana, fananganana, fitrandrahana, menaka, entona, famokarana, fanabeazana ary varotra.
Ny zavatra niainany dia misy: ny raharaham-barotra sy ny varotra, anisan'izany ny raharaha momba ny fividianana sy ny varotra, fifanarahana mihaino, fifanarahana ara-barotra amin'ny ankapobeny ary trano fonenana. Ny raharaha momba ny fandrafetana ny fananana, ao anatin'izany ny sitrapo, ny herin'ny mpisolovava, ny hery maharitra amin'ny fiambenana ary ny torolàlana ara-pahasalamana mialoha. Ny raharaham-panjakana mitantana ny fananana mifandraika amin'ny estates maty (ho an'ny olona sy orinasam-pitokisana).
Ny raharaha mifandraika amin'ny fananana ao anatin'izany ny lease, ny fividianana fananana, ny fanariana azy ireo, ny fanamorana sy ny fanorenam-ponenana.
Andriamatoa Ihab Al Nuzahi
Andriamatoa Ihab Al Nuzahi He dia mpanolotsaina matihanina sy za-draharaha, miasa any amin'ny Emirates Arabo Mitambatra nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'izao.
Miteraka resabe indostrialy marobe, fitakiana ho fiarovana amin'ny ankapobeny ary fanitsakitsahana ny raharaha momba ny fifanarahana ao amin'ny tribonaly indostrialy sy UAE. Misolo tena ny orinasam-pitantananana, andrim-panjakana, mpitantana, mpanatanteraka, mpanatanteraka sy olona tsirairay izy, amin'ny fanomezana toro-hevitra sy mihetsika mifandraika amin'ny fananganana fananana, resaka fiarovana ary fitantanana ny fananana.
Andriamatoa Alaa Sayed Abbas
Andriamatoa Alaa Sayed Abbas - mpisolovava tena manampahaizana, miasa any amin'ny Emira Arabo Mitambatra nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'izao.
Nanoro hevitra ireo orinasa tsy miankina sy vahoaka mifandraika amin'ny fifanarahana ara-barotra izy ireo ao anatin'izany ny fifanarahana amin'ny fananganana, fifanarahana amin'ny famatsiana entana sy serivisy, fifanarahana famarotana tany, fifanarahana fitantanana, fampindram-bola, antoka, herin'ny mpisolovava ary fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana.
Andriamatoa Al Gendi Ahmed Al Gendi - mpisolovava iray efa za-draharaha sy malaza any UAE. Manam-pahaizana amin'ny ady amin'ny raharaham-barotra sy ara-barotra, fifanakalozana ara-barotra, raharaha ara-bola, fitambarana sy fividianana.
Famolavolana sy torohevitra momba ny fanofana, fahazoan-dàlana, fanamorana, fifanarahana fampandrosoana momba ny tany, ary fifanarahana fandraisana anjara. Manomana sy manome torohevitra momba ny fifanarahana amin'ny varotra sy ny fividianana fananana, orinasa ary orinasa.
Manana traikefa be dia be izy amin'ny lafiny fanajariana ny trano, famatsiam-bola ary fananana. Miasa ho an'ny mpampindram-bola, mpamorona ny fananana, mpandraharaha trano, tompon'andraikitra amin'ny kaonty, ary tompon'andraikitra amin'ny fampatokisana izy.
Andriamatoa Khaled Elnakib
Andriamatoa Khaled Elnakib - mpisolovava tena manampahaizana, miasa any amin'ny Emira Arabo Mitambatra nanomboka tamin'ny 2007 ka hatramin'izao.
Manana ny laharam-pahamehana ambony indrindra amin'ny traikefa amin'ny asa sy ny mpampiasa izy. Ny fampiharana azy dia mifantoka amin'ny fitsaram-bahoaka sivily eo amin'ny sehatry ny fifandirana ara-barotra sy ny fandraharahana, fananana trano, lalàna momba ny fananganana, ary tompon'andraikitra matihanina. Nahay mahay amin'ny raharaham-pitsarana rehetra sy ny fitsarana fitsarana federaly UAE izy, anisan'izany ny famakafakana ny fitalahoana, ny fitadiavana, ny vahaolana vahaolana amin'ny fifanolanana, ny fanomanana ny fitsarana ary ny fitsapana.
Izy koa dia misolo tena ny mpanjifa voarohirohy amin'ny famahana olana eo amin'ny alàlan'ny fanelanelanana an-tsitrapo sy ny fihaonamben'ny valim-pitsarana nomen'ny fitsarana. Miaraka aminy 10 taona mahery ny traikefa azony amin'ny fanaraha-maso ara-barotra, fiarovana ny fiantohana, ny tsy fanarahan-dalàna ary koa ny fanararaotana momba ny zava-mahadomelina.
Ramatoa Nourhan Mohamed Adawy
Andriamatoa Nourhan Mohamed Adawy - manana fahazoana ara-dalàna sy traikefa ary miasa ao amin'ny sehatry ny lalàna eto Dubai nanomboka tamin'ny taona 2015 ka hatramin'izao.
Matihanina tokoa ary za-draharaha amin'ny lalànan'ny fananganana, fananganana fitsarana, lalàna momba ny fianakaviana ary fanalam-bahoaka ankapobeny. Nanampy tamin'ny fanomanana fanandramana maro tamin'ny raharaham-pitsarana isan-karazany izy ary namolavola sy niady hevitra momba ny lalàna mifandrafitra sy ny hetsika momba ny hetsika, anisan'izany ny fihetsika hanafoanana sy famintinana fitsarana, mitondra mankany amin'ny famahana ny fahombiazana ary ny fametrahana vahaolana mahomby.
Nandray anjara mavitrika tamin'ny lafiny rehetra amin'ny fanohanan'ny litika izy, anisan'izany ny famoronana fitarainana sy fifanarahana, fanatrehana famerenana ny antontan-taratasy, fikarohana ara-dalàna, ary hifanerasera amin'ireo mpanjifa, mpisolovava, manampahaizana, mpiasan'ny fitsarana, ary amin'ireo sampan-draharaham-panjakana mifehy ny lalàna.